Fetin’ny Pantekosta : Polisy 4677 no hahetsika -
AccueilSongandinaFetin’ny Pantekosta : Polisy 4677 no hahetsika
Fetin’ny Pantekosta : Polisy 4677 no hahetsika
“Filaminana iaraha-misalahy, fisorohana ny loza mialoha”. Io lohahevitra io no napetraky ny eo anivon’ny Polisim-pirenena hiatrehana ny fetin’ny Pantekosta amin’ity faran’ny herinandro ity. Ho fanatanterahana izany, dia polisy miisa 4677 no indray hahetsika manerana an’i Madagasikara, ka ny 2271 amin’izy ireo, dia hiasa eto Antananarivo avokoa. Hitsinjara roa mazava tsara ny andraikitra ho sahanin’izy ireo. Ao ireo hitandro fotsiny ny resaka filaminana, ary ao kosa ireo handrindra ny lafin’ny fifamoivoizana. Tsy dia misy fiovana firy tamin’ny fandaminana sy ny fepetra noraisina tamin’ny fankalazana ny fetin’ny Paska ny lamina napetraka, saingy hisy hatrany kosa ny fanatsarana ny fomba fiasa. Ankoatra ny fiambenana ny toerana mahavory olona maro toa ny toeram-pivavahana sy ny toerana fanaovana fety rehetra, dia hisy ihany koa ireo mpitandro filaminana hanao fisafoana andro sy alina any amin’ireo faritra sy elakelan-trano heverina fa mafana amin’ny asan-jiolahy. Tsy hohadinoina ao anatin’izany ny fijerena manokana ireo toeram-pitsangatsanganana, izay andehanan’ny ankamaroan’ny olona ho an’ny andron’ny alatsinain’ny Pantekosta.
Hiarahan’ny rehetra mahalala fa amin’ny fotoana tahaka izao no hanararaotan’ireo mpanao ratsy hanaovana fandikan-dalàna maro samihafa ka hatao vaindohan-draharaha ao anatin’ny hetsika izay hataon’ireo mpitandro filaminana ny fanaraha-maso ireo izay miditra sy mivoaka ny tanàn-dehibe rehetra. Ny eo amin’ny lafin’ny fandrindrana ny resaka fifamoivoizana indray, dia hisy ihany koa ny fepetra noraisina hahafahan’ny rehetra mifamezivezy am-pitoniana. Etsy andaniny, dia harindra araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana an-drenivohitra mba tsy hisian’ny fitohanana lavareny. Etsy ankilany kosa dia entanina ireo mpamily sy mpampiasa lalana mba hahay hifanaja hisorohana ny loza maro samihafa, satria tsy andraikitry ny polisy sy ny zandary irery ihany no mampanjaka izany fa fiaraha-miasan’ny rehetra.”Omen-danja kokoa hatrany ny fampianarana sy ny fitaizana ary ny fisorohana mba tsy hahatongavana amin’ny fanasaziana”, hoy ny nambaran’ny teo anivon’ity vondron-kery ity. Tanjona ao anatin’izany moa ny hanaovan’ny vahoaka tsy an-kanavaka fety am-pilaminana sy am-pitoniana tanteraka.
Nitohy omaly, ny famotorana lalina an-dRamatoa Claudine Razaimamonjy, tompon’ny Hotel A&C Ivato. Teny amin’ny Chaine Pénale Anti-corruption, teny 67 Ha, indray no nakana am-bavany azy tamin’izany rehefa tontosa ny famotorana nataon’ny Bianco. Araka izany, nigadona ...Tohiny
Firaisan’ny kandidà : Nametraka fitoriana teny amin’ny HCC
Kidnapping sy fanafihana mitam-piadiana : » Wanted » ry Faneva, Tida kely, Princy, Andry Banga, Veniste